Famokarana fanamafisam-peo fanjonoana-machine-equipment
Home / Air Cooling Heating Systems / Masinina fantsom-panafanana alohan'ny fampidirana
Sokajy: Air Cooling Heating Systems Tags: fanorana fantsona fananganana, fantson-drano fanesorana fanindroany, induction preheating system, rafi-panafody fantsona, preheat induction lasantsy, fanangonana fiara, fitsaboana fitsaboana preheat, rafi-pitaterana fampidirana, PWHT, PWHT fanamaivanana, PWHT rafitra, famelomana adin-tsaina
Ny andiam-panolorana fampidiran-tsolika MYD ho an'ny milina Pipeline dia ampiasaina amin'ny lasantsy, ny miondrika, ny fantsona, ny coating, ny fantsom-pahalemana, ny famelomana adin-tsaina, ny hafanana mialoha ary ny fitsaboana hafanana aorian'ny lasantsy.
Air cooling: miasa tsara amin'ny -10 ℃ -40 ℃
Hery fanamafisana induction: manafana ny asa amin'ny lamba firakotra manodidina azy. Hafainganana sy hafanana avo lenta ary kely angovo.
PLC nikasika ny efijery: Intuitive mba hijery sy mora ampiasaina.
Toe-kiran-drivotra malefaka: Mora amin'ny rivotra amin'ny sehatry ny asa.
Ny fiatoana fanindronana fanala fanala: mora ny miasa sy mihetsika.
Tabilao momba ny fitaratra: Raketo ny mari-pamantarana fanamainana rehetra.
Temperature Controller: fanafanana araky ny antsipirian'ny fitakiana fanafanana miaraka amin'ny fandeferana ± 3 ℃.
Alohan'ny fanamafisam-peo: amin'ny fametahana, ny fanonganana, ny fitting, ny tsy famolavolana, ny fametahana.
Fanaovana fitiliana hafanana: Tank, boiler na asa hafa metaly
Fanamainana: fanafanana ravina vy, fanafanana bobongolo, sambo, fandroana zinc, faritra vy lehibe sy tsy ara-dalàna
Fanitsiana ny fantson-drano: tavoahangin-tsolika, tobin-jiro, rano fisotro madio, petroloma fitrandrahana sy fitaovana fantsona hafa
Mampiseho ny mari-pamantarana ary mametaka ny marika, toy ny herinaratra ary ny fametrahana ny toetrandro.
Fahombiazan'ny herin'aratra: Ny herin'ny herinaratra dia miova mivantana mankany amin'ny herin'ny hafanana amin'ny fahaverezan'ny herinaratra.
Fampandrenesana tsy mitombina: Rehefa mandeha ny fandidiana, dia misy alaingon-tsofina mafampana ary misy boaty diso hita eo amin'ny efijery PLC mandeha amin'ny ordinatera.
Fitaovana famolavolana tafiditra: Ny rafitra dia miorina kokoa sy ambany ho an'ny fikojakojana.
Ny Digital Recorder miaraka amin'ny mpanonta tsy mety dia afaka manoratra ny angon-drakitry ny hafanana ary mamorona ny fizotran'ny fizotran'ny fandrosoana.
Fitomboana tsara ho an'ny mari-pana: Multi-teboka hitadiavana ny hafanana; Sampana 6 ho an'ny fanaraha-maso ny hafanana amin'ny ± 3 ° C tolerance; Mafana ihany.
Air Cool System dia mamela ny asan'ny rafitra ao anatin'ny toe-javatra faran'izay farany: -30 º C ~ 50º C
IGBT Module: Manova ny Technology IGBT advanced.
Fanaraha-maso hentitra: Mikasika ny mikrôba mikaroka ary mikarokaroka amin'ny alàlan'ny PLC mozika.
Mora ny fametrahana: Fifampizarana haingana.
Mora ny mivezivezy: amin'ny alalan'ny maso manjelatra na kodiarana.
Azo antoka: Miaro amin'ny tsy fahombiazan'ny herin'aratra.
modely MYD-40 MYD-50 MYD-60 MYD-80 MYD-100 MYD-120
Frequency Output 2KHZ ~ 36KHz
fonosana Size 900 * 660 * 1560mm
Ny endriky ny indétera MYD to compare the resistant hafanana:
Mitsitsy angovo: 30-80%